छोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका – Krazy NepaL
छोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका
May 12, 2021 635
काठमाडौ । कुनै एक महिला गर्भवती हुनु सम्पूर्ण परिवारको लागि खुशिको पल बन्छ । घरमा आउने नयाँ सदस्यलाई लिएर अनेकौं सपना बुन्न थाल्दछन्। त्यो शिशु छोरा या छोरी के होला सबको मनमा कौतोहलता सुरु हुन्छ । यद्यपी कुनै प्रविधिको प्रयोग गरेर लिं’ग छुट्याउँनु कानुनी रुपमा बर्जित छ । यो कार्य नगर्नुहोला । तर घरेलु उपाय अपनाउँने चलन निक्कै छ ।
प्रकृतिले गर्भमा नै मनुष्यको लि’ङ्ग निर्धारण गरेको हुन्छ । वास्तवमा, शिशुको जन्म भन्दा पहिले लिं’ग’ पत्ता लगाउनु नेपाल, भारत लगायत केहि देशमा अ’पराध जस्तै मानिन्छ । उनीहरुको कानूनले कुनै पनि टेक्नोलोजी वा मेशिनको सहायताले जन्म भन्दा पहिले भ्रु’णको लि’ङ्ग परीक्षणको लागि अनुमति दिँदैन। केहि व्यक्तिले लक्षणका आधारमा शिशुको लि’ङ्गकोअनुमान लगाउन सकिन्छ ।
छोरा वा छोरीको जन्म कसरी हुन्छ ?
जीवविज्ञान अनुसार दुई प्रकारका क्रो’मोजो’म महिला र पुरुषमा पाइन्छन्। महिला अं’डाश’यमा ए’क्स ए’क्स क्रो’मोजो’म हुन्छ र पुरुष शु’क्रा’णुमा ए’क्स’ वा’ई क्रो’मोजो’म हुन्छ। ए’क्स ए’क्स क्रो’मोजो’मले छोरी र ए’क्स वा’ई क्रो’मोजो’मले छोराको निर्धारण गर्दछ। जब पुरुष शु’क्रा’णुको वा’ई क्रो’मोजो’म, महिला अं’डाश’यको ए’क्स क्रो’मोजो’म संग मिलन हुन्छ, यस्तो अवस्थामा छोरा जन्मन्छ। त्यस्तै गरी, यदि पुरुष शु’क्रा’णुको ए’क्स क्रो’मोजो’म, महिला अ’ण्डाश’यको ए’क्स क्रो’मोजो’म संग मिलन भए छोरी जन्मन्छ।
गर्भमा हुर्किएको भ्रु’ण छोरा हो या छोरी १०० प्रतिशत सही अनुमान गर्न सकिदैन। मानिसहरूले केहि यस्ता लक्षणहरूको आधारमा गर्भमा के छ भन्ने अनुमान लगाइरहेका हुन्छन् ।
गर्भमा छोरा भएमा देखिने केहि लक्षणहरु
पेटको आकार : गर्भवती महिलाको पेट भारी र तलतिर झुकेको भए गर्भमा छोरा भएको अनुमान लगाउने गरेको पाइन्छ ।
छाला परिवर्तन : गर्भावस्थामा छाला परिवर्तन सामान्य मानिन्छ । तरपनि गर्भमा छोरा छ भने गर्भवती महिलाको अनुहारमा दाना र दागहरू बढी देखिन्छन्। यस बाहेक, गर्भवती महिलाको अनुहार सुकेको जस्तो देखिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
स्त’नको आकारमा बदलाव : गर्भावस्थामा, महिलाको शरीरमा हार्मोनको कारण धेरै परिवर्तन हुन्छन्। यस समयमा, महिलाको स्त’नको आकार बढ्छ, जसले उनलाई स्त’नपानको लागि तयार तुल्याउँछ। यो अवस्थामा दुबै स्त’नको आकारमा अलिक फरक हुन्छ। यदि दायाँ स्त’न ठूलो, बायाँ स्त’न भन्दा भारी भए गर्भमा छोरा भएको लक्षण मानिन्छ।
चिसो खुट्टा र खस्रो हात : गर्भावस्थामा खुट्टा चिसो र सुख्खा तथा खस्रो हातहरू हुनु भनेको गर्भमा छोरा हुनुको संकेत मानिन्छ ।
चटपटीदार खानाहरु खान मन लाग्ने : गर्भावस्थामा धेरै प्रकारका चीजहरू खाने इच्छा हुन्छ । तर मसलादार र नुनिलो खाने कुराको बढी इच्छा भएमा छोरा हुने संकेतको रुपमा लिईन्छ ।
मुटुको धडकन : एक भुण्रको मुटु एक मिनेटमा लगभग १४० चोटि धड्कंछ । यदि भुण्रको मुटु एक मिनेटमा १४० भन्दा कम पटक धड्किएमा गर्भको छोरा भएको लक्षण मानिन्छ।
गर्भमा छोरी भएको संकेत
मुटुको तिब्र धड्कन : गर्भमा भएको छोरीको धड्कन, छोराको भन्दा छिटो हुन्छ। यदि अल्ट्रासाउन्ड स्क्यानले बच्चाको मुटु १४० पटक भन्दा बढी धड्किएको देखाउँछ भने, यो गर्भमा छोरी रहेको लक्षण रुपमा लिइन्छ।
अधिक वाकवाकी हुनु : अन्वेषकहरुका अनुसार बिहान अत्यधिक वाकवाकी भएमा ,गर्भावस्थामा छोरी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
पेटको आकार : गर्भवतीको पेट गोलाकार र गर्भवती हुँदा माथि उठेको भएमा गर्भमा छोरी हुनुको संकेत मानिन्छ।
मुड परिवर्तन : गर्भमा छोरी छँदा महिलाको मुड परिवर्तन हुन्छ। रिस, चिडचिड, तनाव र उदासिनताका भावनाहरू अधिक देखिन्छन्।
स्त’न आकारमा परिवर्तन : गर्भावस्थामा स्त’न’ ध्यानपूर्वक हेरे बच्चाको लि’ङ्ग जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ। देब्रे स्त’नको आकार दायाँ स्त’न भन्दा ठूलो भए गर्भमा छोरी हुनुको लक्षण मानिन्छ।
लसुनद्वारा परीक्षण : गर्भवती महिलाले लसुन खाँदा शरीरको गन्ध परिवर्तन नभएमा गर्भमा छोरी भएको अनुमान लगाइन्छ । वास्तवमा, जब छोरा गर्भमा हुन्छ, शरीरको कपाल गन्हाउन थाल्छ।
मीठा चीजहरू खाने इच्छा : यदि कुनै गर्भवती महिलाले अचानक मीठो चीजहरू ९मिठाइ, चकलेट आदि० खाने इच्छा गर्न थाले गर्भमा एउटी छोरी भएको लक्षण मानिन्छ ।
Prevकाठमाडौं दिन दिनै जोखिममा आज १६८ जनाको मृत्यु , नयाँ संक्रमित ९ हजार ३०५ जना थपिए
Nextविवाह पछि चम्किन्छ यस राशि हुनेहरुको भाग्य, मिल्छ सुखै-सुख !
केही दिन बिहान खाली पेटमा जिरा पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार
यी हुन् महिलामा हुनैपर्ने ३२ लक्षण, तपाईँमा छ त ?
ढाड दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् समाधान गर्ने उपायहरु
सलमान खान आफैँले बोलाएर ‘राधे’ मा डेब्यू गराएका ‘लोता’ को हुन् ?